समाचार – Page5– List Khabar
Home / समाचार (page 5)
4 days ago समाचार 0
काठमाडौँ, असार १३ – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सहित २७ जना नेताहरु संसदमा आधा पनि उपस्थित नभएको पाइएको छ । त्यसको अग्रस्थानमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन् । संघीय संसद् सचिवालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार यो प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षमा २ सय ९६ दिन …
काठमाडौँ, १३ असार । तपाईंलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला, नयाँ बसपार्क बाहिर अर्को बसपार्क छ भनेर ? तर मुलुककै राष्ट्रिय बसपार्क गोङ्गबुस्थित नयाँ बसपार्क बाहिर अर्को बसपार्क सञ्चालनमा रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित तथा पार्किङ गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विसं २०५६ मा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिसँग …
5 days ago समाचार 0
काठमाडौँ । सम्बकन्धलाई दिगो बनाई राख्न र प्रगाड बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाई पार्टनरका चाहना पनि बुझ्नु जरुरी छ । महिला या पुरुष दुवै आफ्नो पार्टनरबाट प्रशंसा सुन्न चाहन्छन् । खासगरी उनीहरुको लुक, पहिरन, काम, पेशा वा अन्य चिजको विषयलाई लिएर उनीहरु प्रशंसा सुन्न चाहन्छन् । एक अर्काको प्रशंसाले आत्म विश्वास …
खुकुरीको बिड नजिक किन यस्तो राखिन्छ ? थाहापाउनुहोस्
खुकुरीको फेदमा एकप्रकारको चिन्ह हुने गर्छ। खुकुरी हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने कुरा हो। हामी सबैलाई खुकुरी किन त्यो प्रकारले डिजाइन गरिन्छ भन्ने कौतुहलता रहेको हुन्छ।आज हामी तपाईंहरुको त्यो कौतुहलता मेटाउछौ। यस बिषयमा हिन्दु धर्ममा त्यसलाई ॐ (ओमकार )को रुपमा लिने गरिन्छ।यसैगरी त्यसलाई गाईको खुरको रुपमा पनि मान्ने गरिन्छ। तर …
आमाको पोल लगाउन रुदैं बाबुलाई फोन गर्ने बालक बने भाइरल
आजकलका बच्चाहरु आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा भन्न लजाउँदैनन् । कतिपय बच्चा त आफ्ना अभिभावकसंग कुनै कुरा चित्त नबुझे त्यसको पोल लगाउन समेत पछि पर्दैनन् । यस्तै एक बालकले आफ्नी आमाको पाले बाबुलाई फोन गरेर लगाएको छन् । जुन भिडियो अहिले भाइरल बनेको छ । भिडियोमा एक बालकले रुदैं आफ्नो बाबुलाई …
प्रेमीले झुट बोलेपछि शंकास्पद बन्यो गायिका सुनार मृत्यु प्रकरण
१२ असार, काठमाडौं । लोक दोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको फेसबुक एकाउन्टमा शनिबार बिहान १ः२० बजे स्ट्याटस पोष्ट भयो, ‘कसैको माया पाउन जति कोशिश गरे पनि पाउन सकिन, तर पनि हार खाइन । तर अहिले धेरै गाह्रो भयो, म बाँचेर पनि दिन्दिनै मर्न सकिनँ, आमा ।’ आफ्नो इच्छाले यो कदम उचालेको …
पोखरामा यसरी भासियो सडक
पोखरामा लगातारको वर्षासँगै परेसँगै सडक भासिएको छ । पोखरा महानगरपालिका ४ मा बुढानिलकण्ठ मन्दिर नजिकैको सडकमा आइतबार विहान ठूलो भ्वाङ परेर भास्सिएको छ । लगातारको वर्षासँगै पोखरा–बागलुङ राजमार्गको फिर्केखोला पुलसँगैबाट बुढनिलकण्ठ मन्दिर हुँदै गणेशटोल सिद्धार्थचोक र गैरापाटन निस्कने सडकमा भ्वाङ परेको हो। राती १ बजेतिर भ्वाङ परेको बगलुङ बसपार्क प्रहरी …
लिभ इन रिलेसनमा बसेका सुर्य श्रेष्ठमाथि लोक दोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको ह ,त्याका बिषयमा अनुषन्धान जारी रहेको छ । अनुषन्धान जारी रहे पनि प्रहरी यकिनका साथ ह, त्या वा आ, त्म ह ,त्या भन्ने बिषयमा टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । काठमाडौंको नेपालटारस्थित आफ्नै कोठामा मृ,त भेटिएकी लोक दोहोरी गायिका सुनारको …
गायिका दिलमाया मृत्यु प्रकरणः काठमाडौँ आए आमा र दिदि , जाहेरी दिदै गर्दा ( हेर्नुहोस् भिडियो सहित )
काठमाडौं – लोकदोहोरी गायिका दिलमाया सुनार मृ,त भेटिएकी छिन् । काठमाडौंको तारकेश्वर-११ नेपालटारस्थित डेरामा उनी शनिबार बिहान मृ,त भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस स्टाटसमा आफूले नै यो कदम चालेको र कसैलाई दोष नदिन अनुरोधसमेत गरिएको छ, तर स्टाटसभन्दा घटना प्रकृति निकै फरक रहेको र आ त्मह’ त्या जस्तो नदेखिएको …
पत्रकार सम्मेलनमै भक्कानिएर किन राेइन मन्त्री रामकुमारी झाँक्री ? यस्तो रहेछ रहस्य
काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सासंद रामकुमारी झाक्रीले सहरी विकास मन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी छन्। उनले आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै राजीनामा दिएको घोषणा गरिन्। त्यसअगाडि नै उनले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा पत्र बुझाएकी थिइन्। बिदाई कार्यक्रममा उनी भावुक बनेकी थिइन्। झाक्रीले बारम्बार कागजले आँसु पुछिन्। उनको कार्यकालमा …
Page5of 278« First...«34567 » 102030...Last »